Imibhalo Yembula Izintatheli Ezicwaningisisiwe zeMonsanto, Izishoshovu Nomculi Womculo Ngisho No-Neil Young - US Right to Know
Imibhalo emisha eqhumayo iveza ukuthi inkampani enkulu yebhizinisi lezolimo laseMelika uMonsanto yagijima “isikhungo sokuhlanganisa” ukuhlola nokuhlambalaza izintatheli kanye nezishoshovu ezazigxeka noma zabhala imibiko yokuhlambalaza ngeMonsanto, kanye nomculi-umbhali wengoma uNeil Young, owakhipha i-albhamu ngo-2015 ebizwa ngokuthi “The Iminyaka YaseMonsanto. ” UMonsanto ubheke umsebenzi kaTwitter kaYoung waze wahlaziya nezingoma ze-albhamu yakhe. Isikhungo sokuxuba siphinde sahlola nentatheli uCarey Gillam, owenze ucwaningo olunzulu futhi wabhala ngeMonsanto kanye ne-Roundup yayo edumile yokubulala izinambuzane, exhunywe nomdlavuza. Le nhlangano iphinde yabhekisa eqenjini labacwaningi elingenzi nzuzo i-US Right to Know, ebelifaka izicelo ze-Freedom of Information Act ngale nkampani. Sisuka eKansas City, eMissouri, sikhuluma noCarey Gillam, intatheli emnkantshubomvu ephenya futhi engumbhali we “Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science,” nase Berkeley, California, Gary Ruskin, co-founder wase-US Ilungelo Lokwazi.